Tag Archive for "इन्डियन प्रिमियर लिग" - आज आईपीएलमा दुई खेल हुँदै, दिल्लीको नजर ‘टप टु’मा !
आज आईपीएलमा दुई खेल हुँदै, दिल्लीको नजर ‘टप टु’मा !
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा आज 'शनिबार' दुई खेल हुदैछ । समुहको शीर्ष दुईमा स्थान बनाउने लक्ष्य सहित दिल्ली क्यापिटल्सले राजस्थान रोयल्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । अर्को खेलमा प्लेअफमा स्थान बनाउन संघर्षरत सनराइजर्स हैदरावादले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरसंग खेल्नेछ । पहिलो खेलमा राजस्थानविरुद्व मैदान उत्रदै गर्दा दिल्लीको लक्ष्य शीर्ष दुईमा स्थान बनाउनु हुनेछ । घरेलु मैदानमा खेल्द... थप पढ्नुहोस्
शिखर धवनको उत्कृष्ट प्रदशनपछी दिल्लीको शानदार जित
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग 'आईपीएल' को २६ औं खेलमा ओपनर शिखर धवनले नटआउट ९७ रन जोडेपछि दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ७ विकेटले हराएको छ । इडेन्स गार्डेन, कोलकातामा समपन्न खेलमा कोलकाताले प्रस्तुत गरेको १ सय ७९ रनको लक्ष्य दिल्लीले १८.५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा प्राप्त गर्यो । ओपनर धवनले उ ६३ बलको सामना गर्दै ११ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । अर्का ओपनर पृथ्वी शाले ७ बलमा २ छक्कासहित... थप पढ्नुहोस्
आइपिएलको सुचीमा परे नेपाली क्रिकेटर सन्दीप, बिमल घर्ती पनि भारतीय क्लबमा
१४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को अक्सनमा परेका छन् । नेपाली क्रिकेट इतिहासमा लामिछाने आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुनेछन् । आइपिएलको ११औँ संस्करणका लागि उनलाई दिल्ली डेयर डेभिल्सले आज भारतीय रुपैयाँ २० लाख दिएको छ । सत्र वर्षीय लामिछानेले अब आइपिएलमा नयाँ दिल्लीका लागि खेल्नेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय फुटबल टोलीका... थप पढ्नुहोस्